ITropical Storm Franklin ingaba yisiphepho emahoreni ambalwa alandelayo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isiphepho esishisayo Franklin, kuzoqina njengoba amahora ehamba. Kubikezelwa ukuthi kungenzeka kakhulu ukuthi ibe yisiphepho ngaphambi kokuthi sihlasele ugu lweSifundazwe saseVeracruz. Uhulumeni waseMexico ukhiphe "isixwayiso" sesiphepho sisuka ethekwini laseVeracruz siya eTuxpan.
Isiphepho esiwele iNhlonhlo Yucatan ngoLwesibili njengamanje sisemanzini eGulf of Mexico. Iqhubekela phambili ngejubane le-17km / h, enomoya omkhulu we-85km / h, kepha kulindeleke "ukuqiniswa okuqhubekayo", ngokusho kwe-CNH.
1 Isiphepho uFranklin namuhla
2 Franklin emahoreni ambalwa alandelayo
Isiphepho uFranklin namuhla
ITropical Storm Franklin ngo-7: 00 ekuseni, isikhathi se-UTC.
Okwamanje isivele ikhona esigabeni "sokuqinisa". Ukushisa kwamanzi okuphezulu kuzothanda Ngaphezu kwesiphepho ukuze iqhubeke nokuzuza ngamandla. U-Alberto Hernández, ongumxhumanisi jikelele weSNM uthe, "ingaze ibe yisiphepho", esigabeni 1 ngokomthetho, esikalini sikaSaffir-Simpson.
Zisuka nje azikho izisulu ezizokhaliswa, futhi wonke umonakalo wezinto ezibangelwe usuvele wehlisiwe, kubika iziphathimandla. EQuintana Roo, kube nokusikeka kokuxhumana, kepha izolo ntambama kubuyiselwe futhi. Ngokunjalo, isexwayiso esiphezulu senziwe sasebenza, silinde uFranklin ukuthi ahlasele izwe futhi ngesimo seSiphepho.
Franklin emahoreni ambalwa alandelayo
Isithombe sendlela uFranklin okulindeleke ukuthi abe ngayo lapho ewela phansi
Njengoba kungabonakala esithombeni, uFranklin uzobe esezuze umfutho omkhulu. Isithombe simele iphuzu eliphezulu elingafinyelela kulo, cishe emahoreni angama-24 ngokuhamba kwesikhathi kwesamanje, isithombe esilengisiwe sangaphambilini. Zombili lezi zithombe zithathwa ukukhomba umoya kumamitha angama-500 ngaphezu kogu lolwandle.
Kulindeleke imimoya eyeqile ku-100km / h. Iziphathimandla ziphinde zaxwayisa ngezimvula ezinamandla eziyolethwa yisiphepho, futhi zingadala nezikhukhula ezibulalayo izaziso ezahlukahlukene kanye nezixwayiso zinwetshiwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Iziphepho zaseTropical » ITropical Storm Franklin ingaba yisiphepho emahoreni ambalwa alandelayo
ISAZI SEZIMALI UMIGUEL BARRIENTOS SANTIAGO kusho
ASIPHAWULE UKUTHI NGANGIKHONA, ENDAWENI YABAKHASI YEQINTAANA ROO; ESIBIZWA NGOKUTHI UMASIPALA WAMASHAHAL WOKUSHESHA Q.ROO, USUKU LOKUFIKA KWEFRANKLIN, KANYE KONKE OKWENZEKA NGOKULINGANISWA OKUMHLOPHE, AKUKHO LOKUZISOLA NGAKHO, NGAPHANDLE KOKULIMA IZINGqalasizinda Zezokuvakasha kanye Nabantu Bendawo
Phendula ku-METEOROLOGIST MIGUEL BARRIENTOS SANTIAGO
//Kusukela ekuqaleni asikho isidingo sokulila izisulu, futhi wonke umonakalo wezinto ezibonakalayo owudalile usevele wehlisiwe, kubika iziphathimandla. EQuintana Roo, uma bekhona ezinye ukusikeka kokuxhumana, kodwa izolo ntambama baphinde babuyiselwa.//
Kuphela kwento ephawuliwe, abanye bayisika. Kungenzeka ukuthi akazange aqaphele. Ngokunjalo, akukho okunye okuphawuliwe ngoQuintana Roo, ngoba okuthunyelwe kunikezelwe kuFranklin.